डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन, जीवन रक्षाको माग ! - Everest Dainik - News from Nepal
डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन, जीवन रक्षाको माग !
काठमाडौं, साउन ३ । जुम्लामा गएको २० दिनदेखि आमरण अनसनरत प्राडा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै राजधानीमा बिहीबार पनि भव्य प्रदर्शन भएको छ ।
माइतीघरबाट शुरु भएको र्याली र प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर सम्पन्न हुने छ । प्रदर्शनमा नागरिक अगुवा, चिकित्सक, विद्यार्थी र विभिन्न पेसा व्यवसायमा आवद्ध व्यक्ति सहभागी छन् ।
याे पनि पढ्नुस डा. केसीसँग वार्ता गर्न सचिव बरालको नेतृत्वमा समिति गठन
यसैगरी डा केसीलाई काठमाडौं ल्याउन सरकार टोली सेनाको हेलिकप्टर लिएर जुम्ला पुगेको छ । डा केसीका समर्थक र विद्यार्थीमाथि स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरेको छ । लाठी चार्ज, अश्रुग्याससहित गोली प्रहार गरेको छ । जसमा दर्जनौ विद्यार्थी र चिकित्सक घाइते भएका छन् । भने केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
ट्याग्स: dr kc, Kathamndu